shaqooyinka Waxbarashada | The Refugee Center Online | Refugee Center Online
Raadi wax ku saabsan waxbaridda iyo shaqooyinka kale ee waxbarashada
Wabarasho micnaheedu waa waxbarasho. Marka aad ka shaqeeyaan shaqooyinka waxbarashada, kaa caawin doonaa dadka ku bartaan qaab ama mid kale.
In Maraykanka, carruurta oo dhan waa inay dugsiga aadaan. Sidaas nidaamka iskuulka waa weyn, oo waxaa jira shaqooyin badan oo waxbarasho si ay u buuxiyaan. Waxaa kaloo jira jaamacado badan, kulliyadaha, iyo xarumaha tababarka. Kuwan oo dhan waxay bixiyaan shaqooyin in goobta waxbarashada.
Waa kuwee shaqo?
Haddii aad rabto in aad hesho shaqo waxbarasho, laga yaabaa inaad rabto in aad wax ku baraan. Waxaad ka heli doontaa tallaabooyin ay ku noqday macalin ka fog hoos u this page. Laakiin waxaa jira shaqooyin kale ee waxbarashada iyo xirfadaha shaqo ka baxsan fasalka dugsiga. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah - badan oo iyaga ka mid ah waxay u baahan yihiin shahaado:
maktabadda - shaqaalaha maktabadda ee kulliyadaha, dugsiyada iyo maktabadaha kale abaabuli buugaagta, joornaalada, iyo majaladaha, iyo xogta computer. Tani waa shaqo wanaagsan oo loogu talagalay dadka jecel inay akhri.
lataliyaha - lataliyaha ardayda ayaa waxay ardayda ka caawisaa joogi on track iyo tacliin iyo waxay ka caawisaa loo hagaajiyo xirfadaha. shaqo A weyn oo loogu talagalay dadka jecel kids caawinta, laakiin ma doonayo in aan baro.
xirriirka dugsiga - sarkaalka xirriirka dugsiga a xajiya waalidiinta, ardayda, iyo macalimiinta ku xiran oo wada shaqaynaya. Tani waxay noqon lahayd shaqo wanaagsan haddii aad rabto inaad caawiso bulshada. Baro sida loo noqon xirriirka dugsiga a
macallinka ESL - ESL waxay u taagan tahay "luqadda Ingiriiska luqadda labaad". macallinka ESL An bara Ingiriisi ardayda kuwaas oo aan ku hadlin afka hooyo.
kaaliye macallin - sidoo kale loo yaqaan caawiye macalinka, kaabayaasha waxbarasho ka caawisaa macalimiinta ee ardayda fasalka iyo taageero. shaqo wanaagsan qof aan shahaado. Baro sida loo noqon kaabayaasha waxbarasho
macalin bedel ku soo galay - macalin bedel A tallaabooyinka lagu macallin ka maqan yahay. Waa shaqo fiican haddii aanad haysan shahaadada macalinka ama haddii aadan rabin in waqti-buuxa ah uga go'an tahay in hal shaqo. Waxaad u baahan doontaa in la heli karo in ay ka shaqeeyaan waqti ogeysiis gaaban.
macalinka Art - macalimiinta farshaxanka baro xirfadaha farshaxanka iyo taariikhda tahay ee heer kasta. Waxay kaa caawin ardayda horumarinta xirfaddaada farshaxan iyo isu muujiyaan. Tani waa shaqo wanaagsan haddii aad tahay artist ah laakiin aan ku kasban kartaa nool oo kaliya iyada oo loo marayo farshaxanka.
College professor - Professor college baro ardayda darajo kasban. Tani shaqo ee qofka qaba aqoon weyn oo waa xirfad tacliin heer sare ah ee ay duurka, taas oo ay noqon kartaa wax ka Baydka Greece si technology.
halkii aad noqon lahaa macalinka a caadiga ah ee dugsiyada dadweynaha? Waa doorasho aad u wanaagsan qofka xaq u. Waxaa jira yaraanta macallimiinta ee dalka Mareykanka. Haddii aad tahay macalin u qalma, aad si fudud shaqo ka heli doontaa.
Waa waxbarasho shaqo sax ah ii?
goobta waxbarashada waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Shaqooyinka Waxbarashada yihiin doorasho mustaqbalkiisa ciyaareed wanaagsan haddii aad rabto in aad wax ku biirisid beesha iyo in ay mustaqbalka ee dalkaaga. Laakiin shaqooyinka waxbarashada yar yihiin sidii sare bixinta sida shaqo ganacsi. Haddii samaynta lacag badan waa muhiim inaad, ka dibna waxbarashada ma laga yaabaa in ay xaq u noqon kuu.
Teaching waa shaqo wanaagsan oo loogu talagalay dadka xilka. Ma aha shaqo wanaagsan oo loogu talagalay dadka qaba dhibaato dhinaca hadalka ah in hore ee group a.
Daawo video ah oo ku saabsan qaxootiga barayay
video ayaa qoreysa Mandy Manning, Macallimow qaranka sannadka 2018
Haddii aad rabto in aad macallin dugsi, meel fiican oo laga bilaabi karaana waa Waaxda Waxbarashada ee gobolkaaga. Tani waa sababta dalalka ku cadeynayaa macalimiinta, iyo shuruudaha dalalka walba way kala duwan yihiin.
Raadi waaxda dawladda ee waxbarashada
Waa kuwan tallaabooyinku in uu noqdo macalinka dugsiga dadweynaha:
Heli shaahaadada koowaad ee
Haddii aad rabto in carruurta yaryar baraan, degree ah ee waxbarashada carruurnimada hore waa wanaagsan yahay. Haddii aad rabto in aad wax ku baraan caruurta ka weyn, ka fiirso wixii mawduuca aad rabto in aad wax ku baraan – tusaale ahaan, xisaabta - iyo in uu noqon doono heerka kuugu fiican.
Sidee si ay u helaan shahaadada bara
Noqo macallinka ardayga
Gobolada intooda badan aad u baahan tahay in ay macallinka ardayga ka hor inta aadan noqon macallin. Waxa aad ku tababaran doonaa wax ku barayay dugsiga kuu dhow, waayo, mid ama laba xilli.
Qaado imtixaanka cilmiga
Gobolada intooda badan aad u baahan tahay in ay gudbaan imtixaanka dalkujoog macalimiinta
Hel shahaado waxbaridda aad
Raadi shuruudaha macallinka gobolka
Maxaa dhacaya haddii aanan rabin in ay ku baraan dugsiga a?
Haddii aad leedahay xirfadaha xafiiska, waxaad codsan kartaa shaqooyinka waxbarashada ee xafiiska dugsiga ama kulliyad oo aan haysan shahaado. Later, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah tababarka ee maamulka dadweynaha in ay kaalmo uga geystaan ​​horumarinta xirfadaada. badan oo ku saabsan xirfado ku bartaan maamulka dadweynaha
Ku qor xirfadaha luuqadda si wanaagsan loo isticmaalo – bilaabi barayay Ingiriisi cusub. Waxaad ka heli kartaa shahaado Els ah si aad u hesho shaqo mushaari ah, ama aad tabaruci kartaa hay'adda dejinta degaanka ama dadka waaweyn xarunta waxbarashada. Baro koorsooyinka ESL online
Noqo taliye - Golaha Aqoonsiga ee La-talinta iyo Barnaamijyada Waxbarashada Related (CACREP) caddeynaya taliyayaasha dugsiga. Baro wax badan oo ku saabsan shaqooyinka la talinta iyo ku heli karaa kooras ah la aqoonsan kuu dhow
Maxaa dhacaya haddii aan horeyba u soo baxday in dal kale?
Upwardly Global caawisaa soo galootiga shaqo-idman, qaxootiga, Entry Level, iyo dadka haysta Immigrant Visa Gaarka ah (SIVs) guuleysatey shaqooyinka xirfadeed ee dalka Mareykanka.
Learnersegdeinc.com waa website a macalimiinta u qalma oo doonaya in ay helaan aqoonsiga more.
Ma u baahan tahay si ay u muwaadin noqoto?
Waa maxay soo socota?
Isticmaal teach.org si looga caawiyo talaabooyinka in uu noqdo macallin
Haddii aadan haysan shahaado, waxaad weli shaqada dugsiga ama jaamacadda ka heli kartaa. xarumaha shaqada Dawladda bixiyaan talo bilaash ah oo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawiyaan resume iyo codsiyada shaqada. Raadi xarunta shaqada ee kuugu dhow
Schoolspring.com waa website shaqo ah goobta waxbarashada.
dheeraad ah oo ku saabsan shaqooyinka Baro in goobta waxbarashada
diirada: Eklas Ahmed, qaxooti ka yimid Sudan oo noqday macallinka ee Portland, Maine - watch Eklas heli yaab cajiib ah!
Hubi in dhammaan ardaydu aad guulaysto
xeelado fasalka Cadaymo ku salaysan iyo taageero barayaasha ardeyda dalka ku cusub.